Uzifaka njani iiNdawo ezininzi zokuThumela kwiRekhodi yakho ye-SPF | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 14, 2021 NgoMvulo, Februwari 7, 2022 Douglas Karr
Siye sanyusa incwadana yethu yeendaba yeveki (qiniseka ukuba uyabhalisa!) kwaye ndiye ndaqaphela ukuba amazinga ethu avulekileyo kunye nokucofa asezantsi kakhulu. Amathuba kukuba uninzi lwezo imeyile azenzi kwi-inbox kwaphela. Enye into ephambili yayikukuba sine Irekhodi le-SPF - irekhodi lombhalo we-DNS - engabonisanga ukuba umboneleli wethu wenkonzo ye-imeyile entsha ngomnye wabathumeli bethu. Ababoneleli ngenkonzo ye-Intanethi basebenzisa le rekhodi ukuqinisekisa ukuba indawo yakho igunyazisiwe ukuthumela i-imeyile evela kuloo mthumeli.
Ukusukela indawo yethu isebenzisa iiGoogle Apps, besele simisele uGoogle. Kodwa kufuneka sidibanise indawo yesibini. Abanye abantu benza impazamo yokongeza irekhodi elongezelelweyo. Akunjalo ukuba isebenza njani, kufuneka ube nayo bonke abathumeli abagunyazisiweyo kwirekhodi enye ye-SPF. Nantsi indlela irekhodi lethu le-SPF elihlaziywa ngayo zombini Indawo yokusebenzela kaGoogle kwaye Isekethe.
martech.zone TXT "v=spf1 ziquka:circupressmail.com ziquka:_spf.google.com ~all"
Kunyanzelekile ukuba zonke iindawo ezithumela ii-imeyile egameni lakho zidweliswe kwirekhodi yakho ye-SPF, okanye mhlawumbi i-imeyile yakho isenokungayenzi ibhokisi yangaphakathi. Ukuba awuyazi nokuba umboneleli wakho wenkonzo ye-imeyile udwelisiwe na okanye hayi kwirekhodi yakho ye-SPF, yenza i Ukukhangela kwe-SPF ngeMXToolbox:
Gcina ukhumbula ukuba, emva kokuba utshintshe irekhodi yakho ye-TXT ngolwazi lwe-SPF, kungathatha iiyure ezimbalwa ukuba iiseva zesizinda zisasaze utshintsho.
tags: 250okemailukuhanjiswa kwee-imeyileindawo yespf ezininziirekhodi le-spf ezininziukubonwa kwespfirekhodi le-spfirekhodi lokujonga ireferensi